दूधमा भन्दा दहीमा पानीको मात्रा कम हुनाले स्वाभाविकरुपमा यसमा पौष्टिक तत्व बढी हुन्छ तर क्यालोरीको परिमाण भने दूधमा भन्दा दहीमा कम हुन्छ ।
दुधको फाइदा संगै बेफाइदा
दूध बालबालिकाका लागि अनिवार्य खाद्यपदार्थ हो । बालबालिकाका लागि न्युट्रेसनको आवश्यकता हुने भएकाले दूध निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कुपोषणको सिकार भएका व्यक्तिले पनि दूध खानुपर्छ । कतिपयलाई थोरै खाएर धेरै क्यालोरी चाहिने हुन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिका लागि पनि दूध निकै राम्रो हुन्छ । किनभने दूधमा अत्यधिक क्यालोरीको मात्रा हुन्छ ।
स्वस्थ मानिस अर्थात् हेल्दी एडल्टले भने दूध नखाँदा राम्रो हुन्छ । आफैँमा स्वस्थ व्यक्तिले दूधको प्रयोग गर्दा ओभर न्युटे«सनको समस्या हुन सक्छ । त्यो किनभने हेल्दी एडल्टका लागि स्टक क्यालोरीको अवश्यकता हुँदैन ।
त्यस्तै, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल भएका मानिसलाई दूधको प्रयोग असुरक्षित मानिन्छ । किनकि दूधबाट पाइने ५० प्रतिशत क्यालोरी स्याचुरेटेड फ्याटबाट प्राप्त हुन्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिले खानामा बोसोकोे मात्रा कम लिनुपर्छ । तर, दूधमा भने फ्याट र क्यालोरी अत्याधिक हुने भएकाले त्यस्ता मानिसले दूधको प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । भैँसीको दूध अझ बढी हानिकारक मानिन्छ । किनभने यसमा गाईको दूधमा भन्दा डबल फ्याट हुन्छ । जसले नराम्रो असर गर्न सक्छ ।
१. दुध नपिउनाले पाचन प्रक्रिया राम्रो हुन्छ । दुधमा पाइने ल्याक्टोजको कारण पेट फुल्ने, ग्यास जम्ने तथा पखाला लाग्ने समस्या हुन सक्छ ।
२. अध्ययनमा भेटिए अनुसार दुधमा पाइने एनाबोलीक स्टाइरसको कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउने समस्या हुन्छ । दुध पिउन छोडेमा यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
३. दुध नपिउनाले प्रोटेस्टेन्ट क्यान्सरको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा भेटिए अनुसार दुधबाट बनेका खानेकुरामा पाइने क्याल्सियमबाट क्यान्सर हुन सक्छ ।
४. दुधले रगतमा चिनीको मात्रा बढाइदिन्छ । त्यसैले दुध पिउन छोडेमा उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ ।
५. एक ग्लास दुधमा करिब २४ मिलीग्राम भन्दा बढि मात्रामा कोलेस्ट्रोल हुन्छ । दुध पिउन छोडेमा कोलेस्ट्रोलको समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
६. दुधमा २० प्रतिशतभन्दा बढि सेन्चुरेटेड फ्याटको मात्रा हुन्छ । यदि दुध पिउन छोड्नु भयो भने मोटोपनबाट बच्न सकिन्छ ।
७. मिल्क एलर्जीबाट बच्न सकिन्छ । दुध नपच्ने व्यक्तिले दुध पिएमा वान्ता हुने तथा एलर्जी हुने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
८. दुध पिउन छाडेमा अनावस्यक रुपमा पेट बढ्न पाउदैन ।
१०. गाई भैसीलाई दिइने विभिन्न एन्टिवायोटिक्स दुधमा समेत पुग्छ। त्यसैले दुध पिउनु स्वास्थ्यका लागी फाइदाकारी छैन ।
दहिका फाईदा र बेफाईदा
दही सगुनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौ । भनिन्छ दही खाएर कतै शुभ कार्यमा जड शुभ हुन्छ भनिन्छ । दहिको फाईद यतिमात्र हैन दहिको सेवानले फाईदा गर्छ र कसैलाई बेफाईदा पनि गर्दछ । दहीमा भएका रासायनिक पदार्थका कारण खाना छिट्टै पच्छ । अपच, कब्जियत र ग्यासको समस्या भएका मानिसलाई दही लाभदायक हुन्छ ।
तर गलत तरिका वा गलत समयमा दही खाँदा शरीरलाई हानि हुन्छ । तपाईंले पनि दही खाँदा गल्ती गरिरहनुभएको छ भने बानी सुधार्नुस् ।
जोर्नीमा पीडा अनि छालामा एलर्जी छ भने दही नखानुस् । दही खाँदा समस्या चर्किन्छ ।
दही खानेबित्तिकै सुत्दा बोसो बढ्छ ।
राति दही खाएर सुत्दा कफ, रुघा र खोकी जस्ता समस्या आउन सक्छन् ।
अमिलो दही नखानुस्
दही धेरै दिनको पुरानो वा अमिलो छ भने खाँदै नखानुस् । यसबाट फूड प्वाइजनिङ, एसिडटी वा पेटको खराबी हुन सक्छ ।
दहीलाई कहिल्यै पनि तताएर नखानुस् किनकि त्यसो गर्दा दहीमा भएका राम्रा ब्याक्टेरिया सकिन्छन् ।
दमको रोगीले नखानुस्
तपाईंलाई दमको रोग छ वा पिनास छ भने दही नखानुस् । यसले श्वासप्रश्वासको समस्या झनै बढाउँछ ।
मासुसँग दही खाने बानी तत्कालै त्याग्नुस् किनकि यसो गर्दा एलर्जी, छालाको समस्या र पेट खराब हुन्छ ।
यस्ता समस्या भएका मानिसलाई दहीले फाइदा गर्छ :
रोगप्रतिरोधक क्षमता कम भएका मानिसलाई दहीले खुबै फाइदा गर्छ । दहीले इम्युनिटी बूस्टिङ स्तर बढाउँछ ।
मोटोपनको समस्या बेहोरिरहेका मानिसले तौल घटाउन दही सेवन गर्नु ठीक हुन्छ ।
मधुमेहका रोगी महिलाको योनिमा यीस्ट संक्रमण भएमा दही खाँदा ठीक हुन्छ ।
दहीका १० फाइदा